प्यारले पागल, बिष्णु गौतमको गजल
सधै बन्द हड्तालको समाचारले पनि । मलाई दिक्क बनायो अखबारले पनि । अब कस्ले बुझीदिने मुरुभूुमिको पीडा, रमीता हेरि रहेको छ सरकारले पनि । भयो केही नदिनुहै बिर्सीएर जानेहरु ,..
सिजन सोईसालको एक गजल
यो जिन्दगी बरु हार्न तल्लीन छ । दुःख फल्ने बारी बार्न तल्लीन छ ।। अब आगन पनि पराई लाग्न सक्छ । कोहि संघार मिचेर सार्न तल्लीन छ ।। कुकुर पनि भुक्दै छ मालिक नचिनेर । यो ज..
गोले के आर चालिसेलीको गजल
जे गरेनि तिम्रै मात्र आश लाग्छ किन जति हेर्यो उती राम्री खास लाग्छ किन होनि धेरै टाढा जान्छु छोडि तिमीलाई नै छायाँसरि झनै मेरै पास लाग्छ किन फूलसंगै हाँस्दै खेल्दै बिर्..
लुटी खाका तरले मरुन् भ्रष्टाचारी नेताहरु ( गजल )
पालै–पालो करले मरुन् भ्रष्टाचारी नेताहरु ! दिनै एकका दरले मरुन् भ्रष्टाचारी नेताहरु !! घैला जत्रा तिनका भुँडी बेलुमसरि फ्यास्सै फुटोस ! लुटी खाका तरले मरुन् भ्रष्टाचारी..
विष्णु गौतमको ५ मुक्तक
१) अन्तिम पल्ट अङगालोमा, बेर्न पाईनन् भने । मर्ने बेला शान्तिको सास, फेर्न पाईनन् भने । सतिले झै तिमीलाई श्राप, दिन्छिन नेता ज्यू, मेरी आमाले नयाँ नेपाल, हेर्न पाइनन् भ..
मायाको तिर्खा लागी रहन्छ , रोम्यान्टिक गजलकार प्रकटको अन्ना प्रेम ( भिडियो सहित)
साउन ३ गते सोमबार काठमाण्डौंमा प्रकट पंगेनी ‘शिव’ को एकल गजल साँझ भयो । गजल साँझमा पटक पटक उनले अन्नाको चर्चा गरे । रोम्यान्टिक गजलका लागि चर्चित प्रकट पंगेनीका धेरै गज..
उहाँ हिट्लर ९ फित्कौली गाईजात्रा
मैले उहाँलाई चिनेको रैनछु । त्यत्रा उपद्रयाँइ कोबाट भयो, किन र कसरी भयो भनेर सोचिरहेको त बल्ल थाहा भयो, उहाँ त हिटलर पो हुनु हुँदोरहेछ । उहाँका शक्ति शैली र सहकार्यको स्वभाव सम्झदाँ त लागेथ्यो यस्ता आँट र ढाँट कार्य गर्न उहाँ कोही कसैबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भनेर । जहाँ जहिले जुन जमातमा पनि मात लागेकाले […]
सरकार भन्ने चिज त हजूर ढल्दै मज्जा आउँदोरैछ
प्रधानमन्त्री लल्याक लुल्युक गल्दै मज्जा आउँदोरैछ सरकार भन्ने चिज त हजूर ढल्दै मज्जा आउँदोरैछ जुन सरकार बने पनि उही त हो नि के बोक्य्राउँछ चीता सँग लाश सरि त्यो जल्दै मज्जा आउँदोरैछ सरकार बन्नु भन्दा अघि विपक्षीको दाउपेच राती चल्ने ट्याक्सी बिलझैँ चल्दै मज्जा आउँदोरैछ मन्त्री पाउने मख्खै पर्छन् नपाउनेले के गरुन् त आफ्नै दलको [&h..
परिवर्तन हाम्रो चाहना हो परिवर्तनलाई रोक्नु हुँदैन दुई दिनमा सरकार बन्नुपर्छ तीन दिनमा ढल्नुपर्छ हरेक पाँच पाँच दिनमा सरकार बदल्नुपर्छ सबैले पालो पाउनुपर्छ बिभागीय भन्दा बिना बिभागीय मन्त्री धैरै राख्नुपर्छ ।
पढ्नुहोस नविन संघर्ष सिन्धुलीको गजल
कोही सम्बन्ध जोडेर पाखुरा सुर्किन्छ। कोही सम्बन्ध तोडेर पाखुरा सुर्किन्छ। देश देश जस्तो त उसले बनाउछ भोलि, जो आफ्नै धर्ती गोडेर पाखुरा सुर्किन्छ। अस्पताल अचेल,अस्पताल जस्तो छैन, डाक्टर बिरामी छोडेर पाखुरा सुर्किन्छ। गन्तव्य भुल्यो कि कतै दूर देखेर डरायो, बिचमै त्यो सफर मोडेर पाखुरा सुर्किन्छ। कलममा घमण्ड बोकेर हिडिरहेछ् जो, साहि..
केआर चालिसेलीको गजल
संसारैको सबै भन्दा जाती भन्छु म त माया गरी प्रायः प्रायलाटी भन्छु म त बिसञ्चो पो होला जस्तोु भन्दै कस्तो हुन्छे जिस्किएरै कैले कैले लाछी भन्छु म त कैले यस्सो गाली गर्छु झनै टाँस्सिई रुन्छे तिनी भन्छे, तिम्रै तिम्रै दासी भन्छु म त यत्तिसारो, यो मन जिती भन्न शब्दै छैन जेभनेुनि हुन्छ हजूर राजी भन्छु […]
रोमान्टिक गजलसहित मण्डलामा प्रकट हुँदैछन्, उनै प्रकट
पोखराका प्रकट पगेनी, प्रणय गजल विधामा स्थापित नाम हो । वासनाका बाधशाह उनको उपनाम हो । रोमान्टिक गजल पारखीहरुका लागि प्रकट, आफैँमा ठूलो इनाम हो । सयौँ गीत, गजल र कविता लेखिसकेका उनी बेला मौकामा मात्र गजल पारखीहरुमाझ प्रकट हुने गर्छन । रोमान्टिक गजल भाका हाली हाली सुनाएर श्रोता र दर्शकको मनमा तरंङ्ग उत्पन्न गराउँछन् […]
सुदिन खश्रेतीका मुक्तकहरु
१ कस्तो जमाना आयो भन्या गमलामै धान रोप्नी छोप्नुपर्ने कुरा छोप्नु छैन देख्नुपर्ने चाहीँ छोप्नी हस्पिटलमा सुई रोप्दा रुने मँन्छे शरीरभरी ट्याटु खोप्ने … २ पानी पर्यो हिलो भयो तालै भएन दुई चार गल्र्फेन्डसंग नछुट्या त सालै भएन मलाई मात्र खुब भन्थ्यो तेरो त फेरी ब्रेकअप भो है भनि उसको पनि बुढी पोईला गइछे बालै […]
मदन पुरस्कारका लागि ७ पुस्तक प्रतिस्पर्धामा
मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्कारका प्रतिस्पर्धी ७ पुस्तकको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि बिजेता पुस्तकको नाम मात्रै घोषणा गरिदै आएकोमा यसपालीदेखि ७ पुस्तकको नाम सार्वजनिक गरेको हो । मदन पुरस्कारका लागि प्रारम्भिक छनौटमा यी सात पुरस्तक परेका हुन् । यीनै पुस्तकमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट एक पुस्तकलाई मदन पुरस्कार दिईनेछ । प्रारम्भिक सू..